"ရှေးဆိုရိုး စကား-သုံးခွန်း" - Barnyar Barnyar
June 11, 2022 thanzin laypyay KNOWLEDGE 0
၁ ။ မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့။၂ ။ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့။၃ ။ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့။ ကြားတော့ ကြားဖူး၏ သို့သော် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သိသူတော့ ရှား၏။ မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ – မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းပါစေနဲ့ ဆိုတာ ကြည်လင်အေးမြတဲ့ တသွင်သွင်စီဆင်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ …
မေတ္တာတရားများ လူသားတွေမှာ မခမ်းခြောက်ပါစေနဲ့ လို့. ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏… လူသားအချင်းချင်း ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟအချင်းချင်း မေတ္တာထားပြီး နေထိုင်ကြမယ် .. အားလုံးသောသတ္တဝါအနန္တအပေါ်မှာလည်း မေတ္တာစမ်းရေများ မခမ်းခြောက်အောင် အမြဲပွားများပြီးနေထိုင်ကြရပါမယ်။
မြစ်အတွင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ စမ်းရေသည် ကြည်လင်အေးမြတဲ့သဘောရှိသလို သတ္တဝါအားလုံးအပေါ်မှာ ပွားများနေတဲ့ မေတ္တာဆိုတာလည်း ကြည်လင်အေးမြလှ၏ ၊ မေတ္တာပွားများသူရဲ့သန္တာန်မှာ မေတ္တာဓာတ်တွေ ဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဟာလဲ တခြားအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသားနဲ့မတူတော့ဘဲ ကြည်လင်လာ၏….
ဘုရားရှင်က … စိတ္တေ ပသန္နေ လောဟိတံ ပသီဒတိ .. လို့မိန့်၏။ စိတ်ကြည်လင်လာပြီဆိုရင် ရုပ်လဲကြည်လင်လာ၏ … အထူးသဖြင့် မေတ္တာ အမြဲပွားများနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျတ်နှာဟာ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မတူတော့ပါဘူး ၊ သတိထားကြည့်ရင် ကွာခြားနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မေတ္တာဆိုတဲ့ အကြည်ဓာတ်ကလေးက. သူ့သန္တာန်မှာ ကိန်းဝပ်နေလို့ပါဘဲ ။
သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ – သစ်ပင်ကြီးဆိုတာ … ဘုရား-တရား-သံဃာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ရတနာသုံးပါးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ ။ပကတိသစ်ပင်ကြီးသည် … အကိုင်းအခတ် ဝေဝေစာစာလည်း ရှိတယ် ၊ ပင်စည်ကလဲ ပြန့်ပွား အရိပ်အာဝါသလည်း ကောင်းနေမယ်ဆိုရင် …အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်မှာ သတ္တဝါ ခိုနားနေနိုင်၏ ၊
ထိုသစ်ပင်ရဲ့. အရိပ်အောက် ဝင်လိုက်တာနဲ့-တပြိုင်နက်ထဲ.. ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးချမ်းမှုကို ခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါးဆိုတဲ့ အရိပ်ဟာလည်း ဝင်ရောက်ခိုနားတဲ့ သတ္တဝါတိုင်းကို .. ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးမြမှုကို အပြည့်အဝပေးနိုင်၏ ။
ဝင်ရောက်ခိုနားတဲ့ သူတိုင်းဟာ ရတနာသုံးပါးရဲ့အရိပ်ကြောင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ငြိမ်းချမ်းသွားတာပါဘဲ ။ ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီး သူမများက … မိမိကို အရိပ်အာဝါသပေးနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို ခုတ်လဲ-မမိပါစေနဲ့ လိုပြေားဆိုကြခြင်းဖြစ်၏… ထို့အတူပါဘဲ မိမိတို့ နားခိုရာ အားထားရာကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ ရတနာသုံးပါးအရိပ်ကိုလဲ မပစ်ပယ်ရဘူး မမေ့ရဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ… ရတနာသုံးပါးရဲ့-ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာ သိပ်ပြီးတော့ကြီးမားလို့ပါဘဲ … သစ်ပင်ကြီးရဲ့အရိပ်ဟာ အေးမြသလို ရတနာသုံးပါး၏အရိပ်ဟာလည်း ပစ္စုပ္ပန်ဘဝသာမက. တမလွန်ဘဝအတွက်ပါ ငြိမ်းအေးမှုကို ပေး၏။ဒါကြောင့် … ရတနာသုံးပါးလို့ ခေါ်ဆိုရတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို မမေ့ပါနဲ့. အမြဲသတိရပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမည်ဟုဆိုလို၏ ။
ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲပါစေနဲ့ – ထုံးအိုးကြီးဆိုတာ …. ရှေးက မိဘ ဘိုးဘွား တွေရဲ့ အစဉ်အလာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းကို ပြောတာပါဘဲ။မိဘ ဘိုးဘွား တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကောင်းများ ၊ မိဘဘိုးဘွားတွေပြုခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး-သာသနာရေး အစဉ်အလာကောင်းမြတ်တဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ အဆုံးအမတွေ အကျင့်စာရိတ္တတွေ အားလုံးကို မဖျက်စီးရဘူး မမေ့ပျောက်ရဘူး။
အစဉ်လာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဆတ်လက်ဆေင်ရွက်ရမယ် …“ ဒါကိုပဲ ထုံးအိုးကြီး မကွဲစေနဲ့ ´´ ဟု ပြောဆိုခြင်းဖြစ်၏ ။ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ် ပုဂ္ဂိုလ် များရှေးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားကြီး ´´ သုံးခွန်း၏အဓိပ္ပါယ် ကို နားလည်နိုင်ပါစေ။
နားလည်သည့်အားလျှော်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေ …. ကျင့်သုံးနိုင်သည်အလျှောက် ဘာသာသာသနာကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။ သုခီအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု… မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ..။Credit အရှင်နန္ဒောဘာသ (ဓမ္မရောင်စဉ်)
၁ ။ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့။၂ ။ သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့။၃ ။ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲစနေဲ့။ ကွားတော့ ကွားဖူး၏ သို့သျော တှငျတှငျကယျြကယျြ သိသူတော့ ရှား၏။ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့ – မွဈကွီးလညျး မခမျးပါစနေဲ့ ဆိုတာ ကွညျလငျအေးမွတဲ့ တသှငျသှငျစီဆငျးနတေဲ့ မွဈကွီးနဲ့တူတဲ့ …
မတ်ေတာတရားမြား လူသားတှမှော မခမျးခွောကျပါစနေဲ့ လို့. ဆိုလိုခွငျးဖွဈ၏… လူသားအခငျြးခငျြး ဆှမြေိုးမိတျသင်ျဂဟအခငျြးခငျြး မတ်ေတာထားပွီး နထေိုငျကွမယျ .. အားလုံးသောသတ်တဝါအနန်တအပျေါမှာလညျး မတ်ေတာစမျးရမြေား မခမျးခွောကျအောငျ အမွဲပှားမြားပွီးနထေိုငျကွရပါမယျ။
မွဈအတှငျးမှာစီးဆငျးနတေဲ့ စမျးရသေညျ ကွညျလငျအေးမွတဲ့သဘောရှိသလို သတ်တဝါအားလုံးအပျေါမှာ ပှားမြားနတေဲ့ မတ်ေတာဆိုတာလညျး ကွညျလငျအေးမွလှ၏ ၊ မတ်ေတာပှားမြားသူရဲ့သန်တာနျမှာ မတ်ေတာဓာတျတှေ ဝငျရောကျလာပွီဆိုရငျ အဲ့ဒီပုဂ်ဂိုလျရဲ့နှလုံးသားဟာလဲ တခွားအခြိနျမှာဖွဈနတေဲ့ နှလုံးသားနဲ့မတူတော့ဘဲ ကွညျလငျလာ၏….
ဘုရားရှငျက … စိတ်တေ ပသန်နေ လောဟိတံ ပသီဒတိ .. လို့မိနျ့၏။ စိတျကွညျလငျလာပွီဆိုရငျ ရုပျလဲကွညျလငျလာ၏ … အထူးသဖွငျ့ မတ်ေတာ အမွဲပှားမြားနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရဲ့မတျြနှာဟာ သာမနျပုဂ်ဂိုလျတှနေဲ့ မတူတော့ပါဘူး ၊ သတိထားကွညျ့ရငျ ကှာခွားနတော တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မတ်ေတာဆိုတဲ့ အကွညျဓာတျကလေးက. သူ့သန်တာနျမှာ ကိနျးဝပျနလေို့ပါဘဲ ။
သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့ – သဈပငျကွီးဆိုတာ … ဘုရား-တရား-သံဃာလို့ချေါဆိုအပျတဲ့ ရတနာသုံးပါးကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈ၏ ။ပကတိသဈပငျကွီးသညျ … အကိုငျးအခတျ ဝဝေစောစာလညျး ရှိတယျ ၊ ပငျစညျကလဲ ပွနျ့ပှား အရိပျအာဝါသလညျး ကောငျးနမေယျဆိုရငျ …အဲ့ဒီသဈပငျကွီးရဲ့ အရိပျမှာ သတ်တဝါ ခိုနားနနေိုငျ၏ ၊
ထိုသဈပငျရဲ့. အရိပျအောကျ ဝငျလိုကျတာနဲ့-တပွိုငျနကျထဲ.. ကိုယျစိတျနှဈပါး အေးခမျြးမှုကို ခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါးဆိုတဲ့ အရိပျဟာလညျး ဝငျရောကျခိုနားတဲ့ သတ်တဝါတိုငျးကို .. ကိုယျစိတျနှဈပါး အေးမွမှုကို အပွညျ့အဝပေးနိုငျ၏ ။
ဝငျရောကျခိုနားတဲ့ သူတိုငျးဟာ ရတနာသုံးပါးရဲ့အရိပျကွောငျ့ ကိုယျစိတျနှဈပါး ငွိမျးခမျြးသှားတာပါဘဲ ။ ဒါကွောငျ့ ရှေးလူကွီး သူမမြားက … မိမိကို အရိပျအာဝါသပေးနတေဲ့ သဈပငျကွီးကို ခုတျလဲ-မမိပါစနေဲ့ လိုပွေားဆိုကွခွငျးဖွဈ၏… ထို့အတူပါဘဲ မိမိတို့ နားခိုရာ အားထားရာကိုးကှယျရာဖွဈတဲ့ ရတနာသုံးပါးအရိပျကိုလဲ မပဈပယျရဘူး မမရေ့ဘူး။
ဘာကွောငျ့လဲ… ရတနာသုံးပါးရဲ့-ဂုဏျကြေးဇူးဟာ သိပျပွီးတော့ကွီးမားလို့ပါဘဲ … သဈပငျကွီးရဲ့အရိပျဟာ အေးမွသလို ရတနာသုံးပါး၏အရိပျဟာလညျး ပစ်စုပ်ပနျဘဝသာမက. တမလှနျဘဝအတှကျပါ ငွိမျးအေးမှုကို ပေး၏။ဒါကွောငျ့ … ရတနာသုံးပါးလို့ ချေါဆိုရတဲ့ သဈပငျကွီးကို မမပေ့ါနဲ့. အမွဲသတိရပွီး ကိုးကှယျဆညျးကပျရမညျဟုဆိုလို၏ ။
ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲပါစနေဲ့ – ထုံးအိုးကွီးဆိုတာ …. ရှေးက မိဘ ဘိုးဘှား တှရေဲ့ အစဉျအလာ လုပျထုံး လုပျနညျးကို ပွောတာပါဘဲ။မိဘ ဘိုးဘှား တှရေဲ့ယဉျကြေးမှု အစဉျအလာကောငျးမြား ၊ မိဘဘိုးဘှားတှပွေုခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး-သာသနာရေး အစဉျအလာကောငျးမွတျတဲ့ ထုံးတမျးစဉျလာတှေ အဆုံးအမတှေ အကငျြ့စာရိတ်တတှေ အားလုံးကို မဖကျြစီးရဘူး မမပြေ့ောကျရဘူး။
အစဉျလာကို ထိနျးသိမျးပွီး ဆတျလကျဆငျေရှကျရမယျ …“ ဒါကိုပဲ ထုံးအိုးကွီး မကှဲစနေဲ့ ´´ ဟု ပွောဆိုခွငျးဖွဈ၏ ။ဒါကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ သူတျောစဉျ ပုဂ်ဂိုလျ မြားရှေးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားကွီး ´´ သုံးခှနျး၏အဓိပ်ပါယျ ကို နားလညျနိုငျပါစေ။
နားလညျသညျ့အားလြှျောစှာ ကငျြ့သုံးနိုငျပါစေ …. ကငျြ့သုံးနိုငျသညျအလြှောကျ ဘာသာသာသနာကို ထိမျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျကွပါစေ။ သုခီအတ်တာနံ ပရိဟရန်တု… မိမိကိုယျကို ခမျြးသာအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျပါစေ..။Credit အရှငျနန်ဒောဘာသ (ဓမ်မရောငျစဉျ)
အသိဉာဏ်နည်းတဲ့သူနဲ့ ပြိုင်မငြင်းပါနဲ့ …
အသုံးပြုပြီးသားလက်ဖက်ခြောက်ဖက်တွေကို အကျိုးရှိအောင်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား…
This Year : 59017
Total Visit : 59017
Total Hits : 336246